नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : उनले त्यस पिडाका बीच आफु र आफ्नी श्रीमति सहित सुनकोशीमा आत्महत्या गर्ने सम्म पनि सोँचे ! लक्ष्मी प्रतिष्ठान किन र कसरी स्थापना भयो ? प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतमको परिवारलाई परेको त्यो बज्रपात के थियो ??
उनले त्यस पिडाका बीच आफु र आफ्नी श्रीमति सहित सुनकोशीमा आत्महत्या गर्ने सम्म पनि सोँचे ! लक्ष्मी प्रतिष्ठान किन र कसरी स्थापना भयो ? प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु गौतमको परिवारलाई परेको त्यो बज्रपात के थियो ??